Brawl Stars သို့ Mobile Games တွေထဲက အကောင်းဆုံး ဂိမ်းတစ်ခု ?? — Anycall Mobile
By RKhar M Thant August 18, 20202Mins Read
Supercell ကထုတ်တဲ့ CoC (Clash of Clans) နဲ့ Clash Royale လိုဂိမ်းမျိုးတွေကို ဆော့ဖူးတဲ့သူ‌တွေရှိကြလား ? ရှိတယ်ဆိုရင် Brawl Stars ဆိုတဲ့ Game တစ်ခု ကိုစမ်းဆော့ကြည့်ကြမလား?
စမ်းဆော့ကြည့်ရအောင် Brawl Stars က ဘယ်လိုဂိမ်းမျိုးလဲ ??
Brawl Stars ဆိုတဲ့ Game ကတော့ Supercell ကနေပဲပြုလုပ်ထားတဲ့ 3vs3 Multi Players Game တစ်ခုဖြစ်ပြီး Apple App Store နဲ့ Google Play Store မှာ Free Download လုပ်ပြီး ဆော့လို့ရနိုင်ပါတယ်။
Brawl Stars ဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေအတွက်ဆော့ရတာတော်တော်လေး Fun ဖြစ်စေတဲ့ Game တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Game ကို ကစားရမယ့်ပုံစံကတော့ “Brawler” တစ်ကောင်ကို ကိုင်ပြီး တစ်ခြား Brawlers တွေကို အသေအလဲတိုက်ခိုက်ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Brawlers ထဲမှာဆိုရင်လည်း စုစုပေါင်း Brawlers ၃၈ ကောင်ထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Brawler ကိုရွေးချယ်လို့ရမှာပါ။ Brawler တစ်ကောင်ဆီတိုင်းမှာ ထူးခြားတဲ့ Attack တွေရှိကြပါတယ်။ နောက်ထပ် Super Attack ဆိုပြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒီ Attack ကတော့ Enemy ကို Damage များများထိတိုင်းပွင့်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းစစချင်းမှာ Shelly ဆိုတဲ့ Brawler တစ်ကောင်ကိုပဲ Free ပေးထားပြီး ကျန်တဲ့ Brawlers တွေကိုတော့ In-game shop, trophy road နဲ့ brawl boxes တွေထဲကနေ Unlock လုပ်လို့ရမှာပါ၊ Brawler အမျိုးအစားအနေနဲ့ Normal ၊ Rare ၊ Super Rare ၊ Epic ၊ Mythic ၊ Legendary နဲ့ Chromatic ဆိုပြီး ၇ မျိုးရှိပါတယ်။ Trophy Road ကနေတစ်ဆင့် Normal Brawler တွေကို Free Unlock လုပ်လို့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ Brawlers တွေကိုတော့ Brawl Box ၊ Big Box နဲ့ Mega Box တွေကိုဖွင့်ပြီး Unlock လုပ်လို့ရမှာပါ။ Big Box နဲ့ Mega Box တွေကို In-shop ထဲကနေ ဝယ်လို့ရပြီး Trophy Road ကနေတစ်ဆင့်လည်း Free ရနိုင်ပါတယ်။ Brawlers တွေထဲမှာ Legendary Brawlers တွေရဖို့ကတော်တော်လေးခဲယှဉ်းပါတယ်။
အခုလောက်ဆို ဂိမ်းရဲ့သဘောတရားကို နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ Gameplay ကဘယ်လိုလဲ?
Brawl Stars ထဲမှာ
3 vs3တိုက်ခိုက်ပြီး Gems ၁၀ လုံးအရင်ရတဲ့ Team က အနိုင်ရမယ့် Gem Grab ( 3v3 mode )
3vs3 တိုက်ခိုက်ပြီး Stars အများဆုံးရတဲ့ Team ကအနိုင်ရမယ့် Bounty Mode ( 3v3 mode )
Team အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပြီး အရင်ဆုံး Goal နှစ်လံုး သွင်း နိုင်တဲ့ Team ကအနိုင်ရမယ့် Brawl Ball Mode (3v3 mode )
ကိုယ့် Base ကိုကာကွယ်ပြီး Enemy Base ကို တိုက်ခိုက်ရမယ့် Heist Mode( 3v3 mode )
Players 10 ယောက်ထဲမှာ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့သူက အနိုင်ရမယ့် Showdown Mode ဆိုပြီး Game Mode အစုံကိုရွေးချယ်ကစားနိုင်မှာပါ။
တစ်ခြား Limited Time Events Modes တွေအနေနဲ့ Hot Zone, Graveyard Shift, Present Plunder, Robo Rumble, Big Game နဲ့ Boss Fight စတဲ့ Modes တွေကိုရွေးချယ်ကစားလို့ရဦးမှာပါ။ ဒီလို Game Mode အစုံကြောင့် Brawl Stars ကို အကြာကြီးဆော့‌လာရင်တောင် ပျင်းလာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး Battle တစ်ခုဆီဟာ ၃ မိနစ်လောက်ပဲကြာတာမလို့ အချိန်လည်း အရမ်းမပေးရတဲ့ Game တစ်ခု လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
Match-making လုပ်ရမှာလည်း Braweler တစ်ကောင်ဆီမှာရှိတဲ့ Trophies အလိုက် Match လုပ်ပေးသွားမှာမလို့ Battle တိုင်းဟာ မျှမျှတတရှိတာမလို့ ပွဲတိုင်းမှာ ဘယ် Player မဆို နိုင်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် Game ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ Supercell ဘက်ကနေ တစ်လ နှစ်ခါ Updates ပေးပြီး brawlers အသစ် တွေ ၊ game mode အသစ်တွေနဲ့ skins အသစ်တွေကို ခဏခဏထည့်ပေးနေတာပါပဲ။ အဲ့အတွက် Players တွေအနေနဲ့ Game ကို ပုံစံအသစ်အသစ်တွေနဲ့ပဲ ဆော့ရမှာမလို့ ဘယ်အကြောင်းကြောင်းမှပျင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အချုပ်အနေနဲ့ Brawl Stars ဟာဆိုရင် SuperCell ကနေထွက်ထားတဲ့ Games တွေမှာ အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပြီး လက်ရှိ Mobile Games တွေထဲမှာ‌ဆိုရင်လည်း တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Brawl Stars ထဲမှာ Games Modes အစုံ ၊ Brawlers အစုံနဲ့ အသစ်အသစ်သော Experiences တွေကိုခံစားလို့ရမှာမလို့ ဒီ Game ကိုမဆော့ဖူးသေးရင် ဆော့ကြည့်ဖို့အကြံပေးရင်း အခု Article ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။